Gaasku waa astaan xanuun oo aan la jeclaysan marka uu ku hayo. | RUUG-CADDAA
Gaasku waa astaan xanuun oo aan la jeclaysan marka uu ku hayo.
Posted by Ruugcadaa on April 17th, 2019
Waxa uu ka mid yahay xanuun badanaa somaalida aad uga sheegato.
Guud ahaan Gastriiga waxaa keena Bakteriyo loo yaqaan H Pylori. Hayeeshee qodobadan kale waa sababi karaan ee hoos ku xusan.
• Wax bas baas badan oo cuntid
• Cuntadoon si fiican u calaanjin/ruugin ama burburin.
• Walwalka iyo walaaca
• Mindhicirada oo aan si fiican u shaqayn
• Caabuq bakteeriyo oo abuurma
• Dheefshiid xumo ku qabsata
• Hadalka badan makra wax la cunayo.
• Sigaarka iyo tubaakada
• Cuntada oo la iska badiyo.
• Calool fadhiga ama calooshoo adag.
• Kuleel iyo Kor hur
• Wadno garaac
• Dibbiro iyo daaco
• Calooshoo iska buuxda had iyo goor
• Shanqar ka yeerta caloosha
• Af qallayl ama carabka oo dhabro yeesho
• Calooshoo soo fuucda
• Hingo badan
• Neef qurmuun
• Abateetka oo kaa xumaada
HADAA SHANTAAN CALAAMADOOD EE SOO SOCDA AAD ISKU ARAGTID FADLAN SI DAG DAG AH UGU TAG DHAKHTARKA:
Cuntada hadii aadka goday waa in uu doctor la xiriiraa.
Hadii aad dhiig matago ama saxradiisa modow eey noqto.
Hadii aad isku aragto xanuun jogto ah.
Misankaagu hadii uu hoos u dhaco waa in uu doctor la kulmaa.
Hadaa darento nawar oo si tar tiib ku bilawdo oo kaaga sii darayo maalin ba maalinta ka danabyso.
CUNTOOYINKA KUU DARAN U DARAN:
Waa in aad iska ilaalisaa cunoyinka Ee ku badn yihiin dufunta, milixda iyo basbaaska.
Iska ilaali cuntada xawaashka iyo basbaaska badan iyo acid badan.
Iska ilaali hilibka cas, maxaa yeelay fats iyo protein badan ayee leyahin gaas wey kiciyan waxaa ku badalan kartaa hilibka cad sida digaaga ama kalunka.
Waa in aad iska ilaalisaa Dhamaan cabitaanada eey ku jiraan citric acid sida orange, lemon iyo waliba kuwa aashitada leh.
CUNTOOYINKA KUU WANAAGSAN :
Qaado cunyinka jilisan oo dheefshiida bur burin kara sida: bariska, koostada, dhamaan cunoyinka jilicsan, lkn waa in eeysan ku badneyn dufunta iyo milixda.
Isku day inaad badsatid:
• Fruit ka
• Digirta, qamadiga, misirka iwm oo nooca madow oo qolofta leh.
• Isku day inaad dufanka xoolaha ku badashid omega-3, omega-6 iyo omega-9.
omega-3,6,9 waa fat ama dufun caafimaad leh oo jirka u baahan inta badan waxaa laga helaa, kalunka sida nooca loo yaqaano #salmon ka saliidisa, sidoo kale waxaa laga helaa looska, qaar ka mid ah qudarta cagaran.
Sidoo kale waxaa kuu wanaagsan in aad cunto cuntoyinka qol foofka leh sida qamadiga.
Waxaa kuu wangsan in aad cunto babaayga maxaa yeelay waxa oo u roonyahy dheefshiidka
DAAWADA DABIICIGA AH EE GAASKA
1= Biyaha bardhada laga miiray: waa antacid waxa eey hoos u dhigyaan acid-ka calsoosha soo deysa. Cab in aadan cuntada cunin, 3 jeer maalintiiiyo habeynkii.
2= sidoo kale aroortii hore markaa aad hurda ka soo toostid waxa wanaagsan in aad cabto koob biyo diiran waxaa ku dareysaa 2 qaando oo malab ah.
3= sidoo kale waxaa isku shiideysaa Dabacase ama karootadaiyo spinach ama koostada. Waxaad isku dartaa 200 ml oo spinash juice ah iyo 300 ml carrot juice ah, maalin walbana cab juice tan. Waxaa labadan geedba kujira maadooyin ka qayb qaadanaya yaraynta gaaska.
4= waa in aad cabtaa biyo badan ugu yaraan 4 liiter maalintii.
5= biyaha qunbaha waxaa laga helaa protein badan. Cabitaanka biyaha Qumbaha waxay kaa yaraynayaan gaaska,hadii si joogto ah loo cabbo.
6= Sanjabiisha gaar ahaan sanjabiisha qoyan, muddo dheer ayaa sanjabiisha loo isticmaalayay in lagu soxo dheefshiidka khaldamay. Waxay ahayd daawo dhaqameed xilli badan soo jirtay. Shaaha leh sanjibiisha qudhiisa waa la ammaanay. Waxaa jira saliidda Sanjabiisha qudheeda in laba dhibcood caloosha dusheda la mariyo laguna daliigo.
7=Toonta Si gaaska uu kaaga nafiso, toonta ayaa ah xalka ugu wanaagsan. Waxay yaraysaa holaca gaaska, waxay abuurtaa in dheefshiidkaga shaqeeyo, waliba maraq toon oo fresh ah haddaa cabtid . Intii aad qaadan lahayd antibaayootiks ku dadaal daawada dabiiciga ah.
W/Q:Dr Faris Al Attas
« Socdaalkii Dubai 2019 Iyo Maxaanu Ku Soo Aragnay?!
Buugaagta iyo hoggaanka Nabad &Nolol »